[Wednesday, October 11th, 17] :: War Murtiyeed laga soo saaray shirkii madaxda maamul goballeedyada uga socday Kismaayo
Kismaayo (RH)- Shirkii hoggaamiyaasha maamullada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarrunta gobalka Jubbada Hoose, waxaa laga soo saaray-War-murtiyeed looga hadlayo qodobada ay madaxda ku heshiiyeen.
Sidoo kale, madaxda ayaa ku dhawaaqay gole ay ku mideesan yihiin oo ay ugu magac-darreen golaha iskaashiga dowlad goballeedyada, sidoo kale madaxda maamul goballeedyada waxa ay si kumeel gaar ah u joojiyeen ka qeybgalka shirka looga hadlayo dib u eegista dastuurka iyagoo ku adkeestay waxa ay ku tilmaameen in arrimaha masiiriga in iyaga lagala tashado.
Waxaa kaloo ay walaac ka muujiyeen in ka gun gaarista doorasho qof iyo cod oo ka dhacda Soomaaliya 2020 uu shaki badan ka jir dowladda fedaraalkana aysan diyaar u ahayn in la gaaro doorashada noocaas oo kale sida ay yiraahdeen.
Sida lagu sheegay war-murtiyeedka, waxa ay madaxdu sameesteen gole ay ku mideysan yihiin oo loogu magac-darray golaha iskaashiga dowlad gobolleedyada, waxaa guddoomiye iyo kuxigeen loo doortay madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waarre, waxa ay xilka heyn doonaan muddo sannad ah.
Madaxda waxa ay soo qaadatay khilaafka ka dhex aloosan dowladda iyo maamul goballeedyada kaasoo markii horre ka soo billowday khilaafka waddamada Khaliijka.
Sidoo kale, war murtiyeedka ayaa lagu sheegay inay yeelan doonaan shirar kale oo ka dhici doonna xarumaha dowlad goboleedyada dalka.
Si kastaba, waa markii ugu horreysay oo shir ay isugu yimaadaan madaxda maamullada oo ay ka maqan yihiin madaxda dowladda dhexe.
Waxaa tan iyo intii ay oo soo billowdeen shirarka madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goballeedyada labo sanno ka hor madaxda waa ay isugu imaan jirtay balse kan waa kii ugu horreeyey oo gaar u ah madaxda maamul goballeedyada.
Madaxda maamullada qaar ayaa ku eedeenaya dowladda in ay fargalin ka wado maamul goballeedyada.
Dowladda Soomaaliya illaa hadda kama hadlin khilaafka kala dhexeeya maamullada iyo eedaha loo soo jeedinayo ee ah in ay fargalin ku heyso maamullada.